Ogaden News Agency (ONA) – Madaxda Midawga Africa oo Muritania Shir Uga Furmay.
Madaxda Midawga Africa oo Muritania Shir Uga Furmay.
Posted by ONA Admin	/ July 1, 2018
Madaxda Qaaradda Afrika ayaa shalay shir uga furmay magaalada Nuwaaqshoot (Nowkot) ee dalka Mauritaniya, waxaana lagu wadaa in ay ka arrinsadaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo xasiloonida qaaradda, ganacsiga xorta ah ee ay dhawaan ku heshiiyeen iyo sidii dhaqaale loogu heli lahaa ururka midowga Afrika.
Waxaase intaasi dheer musuqmaasuqa hadheeyay qaaradda oo balaayiinta doolar lagu lunsado. Gudoomiyaha golaha Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa sheegaya in ku dhawaad 50 bilyan oo lacago sharcidaro ah ay sanad walba qaaradda isaga gudubto.
Kulanka Midowga Afrika ayaa sidoo kale ujeedadiisu tahay in la joojiyo hubka Afrika loo soo dhoofiyo marka la gaaro sanadka 2020. Colaadaha ka jira Suudaanta koonfureed, Jahmhuuriyada Badhtamaha Afkrikada Dhexe iyo dalka Conngo ayaa sidoo kale lagu lafa guri doona shirka.
Madaxweynaha Faransiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale loo balansan yahay inuu la kulmo hogaamiyayaasha shan wadan oo Galbeedka Afrika ah kuwaasi oo dhistay ciidamada isku dhafka ah ee loo yaqaano G5 Saxil.
Shirka ayaa kusoo aadaya kadib uun markii dagaalyahano islaamiyiin ah ay weerareen saldhiga ugu weyn ee ku yaala Mali, halkaasi oo ay ku dileen lix ruux. Ciidamada isku dhafka ah ee G5 ayaa afar sano ka hor loo aasaasay si ay ula dagaalmaan kooxaha xagjirka ah iyo tahriibka sharcidarada ah.